Nhau - Soy Vezvirimwa Ham Sausage
Soy Vezvirimwa Ham Sausage
Uchishandisa soybean tishu protein, konjac yakanatswa poda, protein poda, uye oiri yemafuta seyakanyanya kugadzirwa zvinhu, chimiro chimiro chechinhu chimwe nechimwe chinoshandiswa kutsiva nyama yemhuka uye kuyedza tekinoroji yekugadzirisa ye nyama yemidziyo uye ham sausage.
Soy tishu protein 10, ice mvura 24, oiri yemafuta 7.5, konjac powder 1.2, protein powder 3, modified starch 1.8, tafura munyu 0.9, chena shuga 0.4, monosodium glutamate 0.14, I + G 0.1, vegetarian flavour 0.15, whey protein 0.6, Soy muto wehupfu 0.6, caramel ruvara 0.09, TBHQ 0.03.
Soybean tishu protein → wedzera mvura yekudzoreredza → kupera mvura mumuviri → yakasviba → inotonhorera → yakachengetwa
Wedzera zvinhu zvekubatsira mumvura yechando → fambisa uye emulsify → wedzera soya tishu protein sirika → inomhanya-mhanyisa inomhanyisa → enema → kubika (kubereka) → kuona → chigadzirwa chakapedzwa → kuchengetedza
1. Kudzoreredza mvura: wedzera mvura kuti iyo protein yenyama ye soya ipinze mvura uye iinyorove, uye nekuisazve mvura. Pakati peino nguva kunyongana kwebhuku kunogona kupfupisa iyo rehydration nguva.
2. Kushaya mvura mumuviri: Mushure mekudzoreredza mvura, iyo soybean tishu protein inowedzerwa mune yakasarudzika dhizaini muchina, uye chete yakakodzera inosunga mvura inogona kuchengetwa. Izvo zvemvura zvinowanzo kudzorwa zviri pakati pe20% uye 23%. Iyo tembiricha yesoybean tishu protein mushure mekushayikwa kwemvura kazhinji haipfuure 25 ° C, inoonekwa nekupisa kwemvura inoshandiswa mukudzosera mvura.
3. Silking: Iyo yakadzimwa mvura ye soya tishu mapuroteni zvidimbu zvakamonyaniswa kuita fiber filaments nemuriwo nyama inokanganisa muchina; inodikanwa kuti itonhorere kutembiricha yemukati munguva yekudzivirira hwema uye kuora kweprotein patembiricha yakakwira, inozokanganisa hunhu hwechigadzirwa chekupedzisira.
4. Kusanganisa: Sanganisa zvekubatsira zvinhu zvakadai sekonjac poda, emulsifier, nezvimwewo pamwe nemafuta emiriwo mumvura yechando, uye emulsify nepakati-renji inomutsa. Mushure mekumisa zvakaenzana, isa iyo soya tishu protein silika uye unomhanyisa nekumhanya kwakanyanya kwe15min-20min.
5. Enema: Sarudza yakakodzera casing uye uiise pane enema muchina, enema yakasanganiswa viscous kuzadza zvinoenderana nezvakatemwa zvirevo.
6. Kubika (kubereka): Bika ham iri pa 98 ℃ kweinenge 25min, inokodzera firiji yekuchengetera. Inogona kuiswa steril pa 135 ℃ kweinenge 10min uye inogona kuchengetwa mukamuri tembiricha. Izvo zviri pamusoro zvigadzirwa zvigadzirwa zviri 45g ~ 50g / ubvise, icho chigadzirwa huremu hunowedzera, nguva yekubika inofanira kuwedzerwa.
7. Kuedzwa: Hutsanana kuongorora ndiko kwakakosha basa rekuti zvigadzirwa zvive zvinokodzera uye kuve nechokwadi chehupenyu hwesherufu. Izvo zvinhu zvichaedzwa kazhinji zvinosanganisira hunyoro uye huwandu hwemasero ehutachiona. Huwandu hwechigadzirwa makoloni chinofanira kuve pasi pe 30 / g. Pathogenic mabhakitiriya haafanire kuonekwa.
Post nguva: Nov-28-2020